မိုးရာသီမှာ စုံတွဲတွေအတွက် ငွေမကုန်ဘဲ Romantic ဖြစ်စေမယ့် နည်းလမ်းများ | Duwun
မိုးရာသီက အသစ်စက်စက်ကြင်စဦးဇနီးမောင်နှံတွေ၊ ချစ်သူစုံတွဲတွေအတွက် ပျော်ရွှင်မှုတွေကို ဆောင်ကျဉ်းပေးပါတယ်။
အချစ်ရာသီလို့ တင်စားခေါ်ဝေါ်ကြတဲ့ မိုးရာသီကိုရောက်ရှိလို့လာပါပြီ။
မိုးရာသီက အသစ်စက်စက်ကြင်စဦးဇနီးမောင်နှံတွေ၊ ချစ်သူစုံတွဲတွေအတွက် ပျော်ရွှင်မှုတွေကို ဆောင်ကျဉ်းပေးပါတယ်။ အိမ်ထောင်သက်ကြာပြီး အချစ်ရေးမှာ အေးစက်ချင်သလိုဖြစ်နေတဲ့ ဇနီးမောင်နှံတွေအတွက်လည်း အချစ်အတွက်တဖန်ပြန်လည်မွေးဖွားဖို့အတွက် အကောင်းဆုံးရာသီပါ။ ကဲ ဒီတော့ မိုးရာသီမှာ ချစ်သူစုံတွဲတွေအတွက် ရိုမန်တစ်ဆန်ဆန်ဖြတ်သန်းလို့ရမယ့် နည်းလမ်းတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်မယ်နော်။
ကော်ဖီပူလေးနဲ့မိုးရေစက်တွေက တွဲလက်တွေကို ခိုင်မြဲစေပါတယ်။ ချစ်သူကိုပွေ့ဖက်၊ ကော်ဖီပူပူလေးကိုသောက်ရင်း မိုးရွာတာကိုထိုင်ကြည့်နေရတဲ့ဖီးလ်က ဘာနဲ့မှမလဲနိုင်အောင် ခံစားရစေမှာပါ။ ဒါကြောင့် မိုးရာသီမှာ နွေးနွေးထွေးထွေးလေးကျော်ဖြတ်နိုင်ဖို့ ချစ်သူကို အချိန်ပေးသင့်ပါတယ်။
တစ်ခါတစ်လေမိုးရွာနေချိန်မှာ ငယ်ငယ်တုန်းက ကစားခဲ့ဖူးတဲ့ ဂိမ်းလေးတွေပြန်ကစားပြီး ကလေးဘဝအမှတ်တရတွေကိုလည်း ပြန်ဖန်တီးနိုင်ပါသေးတယ်။
မိုးရေထဲမှာ ချစ်သူနဲ့နှစ်ယောက်အတူ ဦးတည်ရာမရှိဘဲ လမ်းလျှောက်သွားခဲ့ဖူးတာ နောက်ဆုံးဘယ်အချိန်ဖြစ်မလဲ? တော်တော်ကြာခဲ့ပြီ မဟုတ်လား? ဒါဆိုရင် ဘာလို့ အချိန်ဆွဲနေတော့မှာလဲ။ မိုးရွာထဲကို ထီးတစ်ချောင်းနှစ်ယောက်အတူဆောင်းပြီး လမ်းထွက်လျှောက်တော့လေ
မိုးသည်းလေတစ်ဦးကိုတစ်ဦးကာကွယ်ဖို့အတွက် ပိုပြီးနီးနီးကပ်ကပ်နေရလေဖြစ်တာမို့ ချစ်သူနှစ်ယောက်အကြား အေးစက်နေတဲ့ ဆက်ဆံရေးကို ပြန်လည်နွေးထွေးသွားစေနိုင်ပါတယ်။
မိုးရွာတဲ့နေ့ရက်တွေကို ရင်ခုန်စရာအဖြစ်ပြောင်းလဲဖို့ နောက်ထပ်အကြံကောင်းတစ်ခုကတော့ ဖယောင်းတိုင်မီးလေးတွေထွန်းပြီး ညစာအတူစားကြည့်ပါ။ ဒါက အိမ်မှာနေရင်းချစ်သူနဲ့အတူ ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာ ချိန်းတွေ့မှုဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။
ရင်ခုန်စရာဂီတသံစဉ်တွေဖွင့်ထားပါ။ မီးမှိတ်ထားပါ။ ဝိုင်ကလေးအတူသောက်ရင်း ဘဝမှာ မမေ့နိုင်စရာညချမ်းတစ်ခုကို ဖန်တီးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
မိုးရာသီမှာ ချစ်သူတွေကြား ရင်ခုန်သံတွေမြန်စေမယ့် မိုးသဲသဲလေးမှာ ကားလျှောက်မောင်းရတာပါပဲ။ ကားပေါ်တက် အချစ်သီချင်းတွေဖွင့်ပြီး ကားလျှောက်မောင်းကြည့်တာမျိုး လုပ်ကြည့်ပါ။ ကားပေါ်မှာ နှစ်ယောက်အတူ အကြင်နာပေးပြီး လက်ကလေးတွေကို ဆုပ်ကိုင်ထားပါ။ ရင်ခုန်သံတွေ မြန်လာစေပြီး မိုးရွာတဲ့ မမေ့နိုင်တဲ့ အမှတ်တရတွေ ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။